अब सार्वजनिक सवारीले सबै सिटमा यात्रु राख्न पाउने, कहिलेदेखि हुन्छ नियम लागु ? — Sanchar Kendra
अब सार्वजनिक सवारीले सबै सिटमा यात्रु राख्न पाउने, कहिलेदेखि हुन्छ नियम लागु ?
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीमा पनि सबै सिटमा यात्रु चढाउन दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले बढीमा आधा सिट क्षमतामा चलाउनुपर्ने पहिलेको निर्णय उल्टाएको हो ।